घटस्थापनाकै दिन सुरु भए १० मिडिया – Media Kurakani
October 17th, 2020 Rabi Raj Baral Media News
घटस्थापना (कात्तिक १) को दिन पारेर सुरु भएका अनलाइनहरूलाई बिहानै शुभकामना दिइयो । सुरुको सूचीमा थिए- इकागज डट कम र नेपालवाच डट कम ।
तर दिन ढल्दै जाँदा सूची लामै भयो । साँझसम्म आइपुग्दा ८ वटा समाचार पोर्टल र दुईवटा टेलिभिजन एकैदिन सुरु भएको भेटियो ।
मेरो नजरमा नपरेका सायद अरु पनि मिडिया छन् कि आज सुरु भएका ! छन् भने तल कमेन्टमा लेख्नुस् । यो सामग्रीमा म तपाईँलाई आज सुरु भएका मिडियाहरूको एकसरो झलक देखाउँदै छु । (आइतबार बिहान अपडेट गरी शीर्षकमा थप गरिएको )।
१) इकागज डट कम
यो साइट हेर्दा अलिक तयारीसहित आएको देखिन्छ । इकागजको टिममा यसअघि अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा कार्यरत पत्रकारहरूको बाहुल्यता देखिन्छ । यसअघि अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका प्रधान सम्पादक रहेका हरिबहादुर थापा, अन्नपूर्ण पोस्टमै सम्पादक रहेका विकास थापा र अन्नपूर्णमै समाचार प्रमुख रहेका चन्द्रशेखर अधिकारी यो अनलाइनमा संलग्न छन् । यस्तै अन्नपूर्णमै आर्थिक ब्युरो प्रमुख रहेका पुष्पराज आचार्य, फुर्सद परिशिष्टाङ्क प्रमुख विमल आचार्य, अन्नपूर्ण सम्पूर्णमा कला ब्युरो प्रमुख रहेका सामिप्यराज तिमल्सेना पनि यो अनलाइनमा छन् । मल्टिमिडिया, प्रदेश ब्युरो, प्रवास, मार्केटिङ, प्रशासनसहितको टिम यो अनलाइनले बनाएको छ । इकागज मिडिया प्राइभेट लिमिटेडद्वारा सञ्चालित यो अनलाइनमा वसन्त वन अध्यक्ष छन् । सांग्रिला माइक्रोसिस्टम प्रा.लि., सांग्रिला इन्फरम्याटिक्स प्रा.लि., जिओसफ्ट टेक्नोलोजी प्रा.लि.लगायतका कम्पनीका सञ्चालन उनी विराटनगर जुट मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।
इकागजले सम्पादकीयमा लेखेको छ- हामी ‘सनसनीपूर्ण’ वा ‘भाइरल’ हुनेमा होइन, यथार्थ तथ्यमा विश्वास गर्छाैं । यसैलाई मार्गदर्शन–मन्त्र बनाउने निधोको निरन्तरतामा रहनेछ, हाम्रो टिम । नेपालका मिडिया बेलाबेलामा जानेर नजानेर अनेक गल्तीहरू गरिरहन्छन् । तर ती गल्ती सच्याउँदैनन् । इकागजले काम गरिरहँदा गल्ती हुन सक्ने भन्दै भूलचूक हुँदाका बखत माफी माग्ने प्रतिबद्धता सम्पादकीयमा उल्लेख गरेको छ । ‘गल्तीविना कसैको जीवन–यात्रा हुन्न । खालि त्यसमा नियतवश या बदनियत तत्व कति हाबी छ भन्ने चाहिँ हेक्का राख्नैपर्छ ।’
इकागजको सञ्चालक संस्थाका अध्यक्षका विषयमा विगतमा कतिपय नेपाली मिडियाले समाचार समेत लेखेका थिए । जस्तो, नयाँ पत्रिकामा ‘जुटमिलमा लुट : सवा अर्ब लगानी गर्ने सरकारको सेयर ४६ प्रतिशत, जम्मा ५७ लाख लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको सेयर ५४ प्रतिशत’ र ‘जुटमिलमा सरकारको ६८% सेयर ३३% मा झार्ने खेलाडी को हुन् ?’ शीर्षकका समाचार । त्यस्तै हिमाल खबरपत्रिकाको जुट ‘मिल्समा रजाइँ’, कान्तिपुरको ‘जुट मिलको सेयर विवाद अख्तियारमा’, पहिलोपोस्टको ‘जुट मिल्सको नसुल्झेको गाँठो, न साधारणसभा न कर्मचारीलाई तलब’ र बिजमान्डुको ‘विराटनगर जुट मिल्स बन्द, व्यवस्थापन सम्पर्कबाहिर’, हाम्रो इकोनोमी अनलाइनको ‘यसरी कब्जा गरे यीनले बिराटनगर जुट मिल’ केही उदाहरणहरू हुन् ।मैले यी समाचारको अन्तर्वस्तु विस्तृत अध्ययन गरेको छैन । पाठकहरूको सन्दर्भका लागि मात्र यी समाचार यहाँ राखेको हुँ ।
बरु मैले इकागज डट कमको सञ्चालक संस्थाका अध्यक्ष वनलाई माथि लिंक राखिएका समाचारका सन्दर्भ कोट्याएर तपाईँका बारेमा पनि समाचारहरू आएका रहेछन्, तपाईँको के प्रतिक्रिया छ भनेर सोधेका थिएँ । उनको जवाफ यस्तो छ-
सुरुमा जाँदा मलाई पनि धेरै कुरा थाहा थिएन । ६६ सालमा भएको एउटा निर्णय लुकाइएको रहेछ । त्यसपछि सेयर बाँडफाँडका विभिन्न निर्णय भएका रहेछन् । जसका कारण सरकारको स्वामित्व ६८ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको रहेनछ । मिडियामा मेराबारे आआफ्ना विश्लेषणहरू भए । भ्रम सिर्जना पनि भयो बद्नियत राखेको भनेर । तर मैले पुराना निर्णय खारेज गरेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेँ, कोर्स करेक्सन गरेँ । मेरो दाबी के छ भने मैले राज्यलाई घाटा लाग्ने काम गरेको छैन । मेरो नाममा आएको सेयर खारेज गरेर सरकारको नाममा ६८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । कुनै पनि सम्पत्ति बेचबिखन हुन दिइनँ । परीक्षण उत्पादन गरेर भारतसम्म पुर्‍याउन सकियो । कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिन्छ किनभने उत्पादन गर्न यो सक्षम छ भन्ने कुरालाई संस्थागत गरिएको छ । कर्मचारीले तलब खान नपाउने आदि समस्या छन् तर यी समाधान गर्न सकिने समस्या हुन् । मुख्य कुरा अपचलनको उद्देश्य र लालच राखेर काम गरेको छैन । इमान्दारितापूर्वक रुग्ण उद्योगलाई माथि उठाउने काममा लागेको छु, लागिरहन्छु । नेपालको पहिलो उद्योगको हीत संरक्षणमा सम्पूर्ण प्रयास गरेको छु । तर मिडियामा यस्तो निर्णय भयो भनिदियो तर मिति नलेखिदियो । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष म छु, मैले नै गरेको जस्तो भयो, पीडित पनि मै भएको छु । रुग्ण उद्योगलाई उठाउने क्रममा भएका कतिपय कमजोरीलाई बदमासीका रुपमा व्याख्या गरेर छवि ध्वस्त पार्ने काम पनि भयो । कतिले गम्भीरतापूर्वक नै लेख्नुभएको होला, कतिले सतही रुपमा हेर्नुभयो होला, कति परिचालित पनि थिए होलान् तर प्रयास गर्दागर्दै चुकिएका कुरालाई नियतबस भएका भनेर आक्रमण गर्दा काम गर्न खोज्ने निराश हुन्छ । मिडियाले सही धर्म निर्बाह गर्न सकेन भने समाजमा निराशा छाउँछ ।
मेरो दोस्रो प्रश्न थियो- तपाईँ सूचना प्रविधिको व्यवसायमा रहेको उद्यमी । आफैँले मिडिया सञ्चालन गर्नुपर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? उनको जवाफ छ-
साथ संगतको कुरा पनि आउँछ । त्यसमा महत्त्वाकांक्षा पनि जोडिन्छ । हामी आइटीमा सिस्टम बनाइरहेका छौँ । कन्टेन्टमा पनि काम गर्न मन थियो । मौका जुर्‍यो । मिडियामा सबै नकारात्मक मात्र छैनन्, समग्र मिडिया अभियानमा हामी पनि कन्ट्रिब्युट गरौँ भनेर सुरु गरियो । व्यावसायिक मर्यादा र प्रेसको स्वतन्त्रता कामय राख्दै सकारात्मक योगदान दिने महत्त्वाकांक्षा छ । ममाथि ‘अट्याक’ भयो, मेरो ‘ड्यामेज’ भयो, त्यो एउटा कुरा हो । तर प्रयास गर्दा गर्दै चुकिएका कुरालाई नियतबस गरिएको भन्दा निराशा सिर्जना हुन्छ । मैले प्रकाशकीयमा पनि लेखेको छु । सोचेजसरी योगदान दिन सकिएला नसकिएला तर त्यसको प्रयत्न गर्ने हो ।
२) नेपाल वाच
‘बेथितिमाथि निगरानी’ यो अनलाइनको मूल नारा छ । युवा पत्रकारहरू आबद्ध नेपालवाचले ‘बेथितिविरुद्धको पत्रकारिता’ शीर्षकमा पहिलो सम्पादकीय लेखेको छ । ‘राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने… भूमिका र खाँचो पुरा गर्ने प्रयासमा…पहिलो पाइला चालेका छौं’, सम्पादकीयमा उल्लेख छ, ‘जनतालाई सूसूचित गर्ने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु नै हाम्रो प्रमुख दायित्व हुने छ । राज्यका हरेक निकायमा हुने बेथितिमाथिको निगरानी र पर्दाफासलाई हामीले प्राथमिकता दिनेछौं । बढेको नीतिगत भ्रष्टाचारमा हाम्रो सुक्ष्म निगरानी हुनेछ ।’
यसअघि नयाँ पत्रिका दैनिकका सुशसानका विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार पुष्प ढुंगाना यो अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक छन् भने उनीसँग ७ जना पत्रकार सुरुवाती चरणमा कार्यरत छन् । नेपाल वाच मल्टिमिडिया प्रालि सञ्चालक संस्था रहेको यो अनलाइनका अध्यक्ष भविश्वर शर्मा छन् ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण पत्रिका’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर सुरु भएको मेडिकलपत्रको साइटमा न सम्पादकको नाम छ, न यसमा को काम गर्छन् भन्ने जानकारी छ, न त यसको सञ्चालक वा सञ्चालक संस्थाकै नाम छ ।
गण्डकी प्रदेशको पोखरामा कार्यालय रहेको एभरेस्टआवाज डट कम पनि घटस्थापनाको दिन पारेर शनिबारदेखि सुरु भएको हो । यो अनलाइनले एउटा प्रेस विज्ञप्ति नै छापेर आफ्ना प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेको छ । ‘सन्तुलित समाचार, खरो बिचार’ यो अनलाइनको मुख्य नारा हो । पोखरेली रेडियोप्रेमीहरूको परिचित आवाज दीपेन्द्र श्रेष्ठ यो अनलाइनका सम्पादक छन् । उनी यसअघि लामो समय रेडियो अन्नपूर्णमा समाचार प्रमुख थिए ।
एभरेस्ट मिडिया हाउस प्रालिले सञ्चालन गर्ने यो अनलाइनमा अध्यक्ष कर्मकुमारी गुरुङ छन् । ‘दुई दशकको पत्रकारिताको अनुभवले हामीले बुझेका छौं पत्रकारिता पेशा हैन, यो त समाज, नागरिक र देशका लागि गरिने निशर्त सेवा हो । एउटा गुरुत्तर जिम्मेवारी हो । आवाज बिहिनको आवाज हो । विकृति र बिसंगति बिरुद्दको निरन्तर खबरदारी हो’, यो अनलाइनको पहिलो सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘हामी समस्याको पोको मात्र छताछुल्ल पार्दैनौं । त्यससँगै समाधानको उपाय पनि सुझाउने पत्रकारिताको लय समात्न चाहन्छौं । यसैले हामी यो यात्रालाई सार्थक बनाउन तपाईंको समसाथ, रचनात्मक सुझाव, आवश्यक सहयोग र सदैव सद्भावको अपेक्षा राख्दछौं ।’
५) अनलाइन न्युज सेभेन
पञ्चकन्या मिडिया ग्रुप प्रालिद्वारा सञ्चालित यो अनलाइनको टिममा पाँचजना छन् । यो अनलाइनले अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक र निर्देशकका अलग अलग सन्देशहरू र सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ ।
‘…आजको पत्रकारिता पेशा निक्कै जोखिमपूर्ण भन्ने सन्देश गएको छ, केही मिडिया मालिकका कारण’, अनलाइनन्युज सेभेनको सम्पादकीयमा भनिएको छ । डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै सम्पादकहरूले विज्ञप्ति निकालेको तर कोरोनाको बाहानामा कामबाट निकालिएका पत्रकारबारे मौन रहेको टिप्पणी केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेका सन्दर्भमा यो अनलाइनले यसबारे पनि बोलेको छ । ‘ठूला अक्षरमा गोविन्द केसीहरूको सत्याग्रहका निम्ति समाचार कोर्ने र समूह बनाएर विज्ञप्ति जारी गर्ने नामहरू ‘ब्रान्ड’ हुन् । तर तिनै ब्रान्डले लगेका श्रमजीवि ढोकैमा अनशन (सत्याग्रह) बस्नुपर्ने नियतीपछि मात्रै श्रमका निम्ति सम्झौता हुन्छ भने तिनले समाजको सत्य मागलाई कसरी सम्बन्धित निकायमा सोध्लान् ?’, सम्पादकीयमा प्रश्न छ, ‘हाकिमले कसरी सम्पादन गर्लान् भन्ने व्यवाहारिक प्रश्नले घोच्नुपर्ने हो । मिडियाकर्मीलाई यो छेस्कोले घोचीरहन्छ, सँधैभरी ।’
सम्पादकीयमा अगाडि भनिएको छ-
ठूला र ठालू कुरा होइन, सिधा प्रश्न केन्द्रित अध्याय सुरु हुनेछ, अब । पत्रकारको पहिलो धर्म भनेको सत्याग्रह लेख्नु हो, आफ्नो न्यायका लागि सत्याग्रह बस्नु होइन । पत्रकार आफैं न्यायमा छैन भने उसले न्यायको वकालत गर्न सक्तैन, प्रभावको शिकार हुनेछ । यसर्थ सतहमा रहेका कतिपय दृश्यहरू अझै नेपथ्यमा पनि छन् । यी चित्र र चरित्रको मझेरीमा पत्रकार रह्यो भने सन्तुलित समाजका निम्ति समाचारीय योगदान कसरी सम्भव हुनेछ ? यो प्रश्न लोकलाई छाड्दै हाम्रो प्रश्न हर अन्याय गर्नेका निम्ति झटारो बनेर उठ्नेछ ।
६) डन न्युज
२०६८ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएर पछि बन्द भएको ‘डन न्युज’ दैनिकले अनलाइन पुनः सुरु गरेको छ आजैदेखि । यो अनलाइनले सम्पादकीयमा भनेको छ- ‘डन न्यूज’ एक्लैले मात्र सबै वेथिति र समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन । तर जति सकिन्छ त्यो ईमान्दारिताका साथ गर्ने प्रण गर्दछौं । विभिन्न आवरणमा हाम्रो समाजभित्र लुकेका भ्रष्ट, दलाल, माफिया, गुण्डा, अपराधी, पतित र व्यभिचारीमाथि हाम्रो निर्मम प्रहार हुनेछ । पत्रकारिताको आचारसंहिता र प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर गलत यस्ता पात्रहरुको हरेक धन्दामाथि हामी निगरानी र चिरफार गर्नेछौं ।
डन न्यूज पब्लिकेशन प्रालि सञ्चालक संस्था रहेको यो अनलाइनमा रोजिना अधिकारी अध्यक्ष छन् भने राजेन्द्र अधिकारी प्रधान सम्पादक ।
७) क्यापिटल एचडी टेलिभिजन
तस्बिर साभारः capitaltvhd.com
घटस्थापनाकै दिन पारेर क्यापिटल मिडिया ग्रुप (सीएमजी) ले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट क्यापिटल टेलिभिजन (एचडी) को परीक्षण प्रसारण सुरु गरेको छ । टेलिभिजनको अनलाइनमा रहेको समाचारअनुसार क्यापिटल मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष प्रकाशबाबु पौडेलले टेलिभिजनको परीक्षण प्रसारण आरम्भ गरेका हुन् । सीएमजीले ‘सीएमजी मोबाइल एप्लिकेसन’ पनि लन्च गरेको छ । चाइना मिडिया ग्रुपसँग सहकार्य गरिरहेको सीएमजीले प्रविधिको विकास सँगसँगै टेलिभिजनको आवश्यकता महसुस गरेर क्यापिटल टिभी एचडी सञ्चालनमा ल्याएको अध्यक्ष पौडेलको भनाई उद्‍धृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ ।
सीएमजी अन्तर्गत काठमाडौंमा क्यापिटल एफएम तथा पूर्व मोरङ र पश्चिम पोखराबाट रेडियो सारङ्गी पनि सञ्चालनमा छन् । सीएमजीका प्रबन्ध निर्देशक सुशील राउत हुन् ।
रुकुम मुसिकोटबाट सुरु भएको कखरा डट कमले सञ्चालक, सम्पादक र टिमबारे केही खुलाएको छैन । रुकुम र आसपासका स्थानीय खबरहरूको बाहुल्य यो अनलाइनमा देखिन्छ ।
९) इन्जिनियर्स पोस्ट
इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई मूलधारको पत्रकारितामा ल्याउने उद्देश्य राखेको यो अनलाइन पोर्टल पनि घटस्थापनाकै दिनदेखि सुरु भएको हो । आज सुरु भएका अनलाइनहरूमध्ये यो मात्र एउटा विशेष क्षेत्र समेट्ने निस (Niche) अनलाइन हो, अरु सबै जेनेरल अनलाइन देखिन्छन् । प्रमोसन मल्टिमिडिया एन्ड प्रडक्सन हाउसले सञ्चालन गर्ने यो अनलाइनका सम्पादक कृष्ण आचार्य हुन् ।
१०) ग्लोबल टेलिभिजन
तस्बिर साभारः globaltvnepal.com
कालिञ्चोक टेलिभिजन नेटवर्क प्रालिले सञ्चालन गर्न लागेको ग्लोबल टेलिभिजनको अनलाइन संस्करण घटस्थापनाका दिन सुरु गरिएको हो । टेलिभिजनको केन्द्रीय कार्यालय धुम्वाराहीमा भएको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सह महामन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पुर्व मन्त्री एनपी सावदले उक्त अनलाइनको उद्घाटन गरेको समाचारमा जनाइएको छ । टेलिभिजनका अध्यक्ष सुरेश काफ्ले छन् भने टेलिभिजनका निर्देशक एवं प्रधान सम्पादक जीवन काफ्ले छन् ।
न्युजपोलार डट कममा नयाँ प्रधान सम्पादक
पत्रकार सुशील अर्याल । तस्बिर साभारः newspolar.com
न्युजपोलार डट कमको प्रधान सम्पादकमा पत्रकार सुशील अर्याल नियुक्त भएका छन् । उक्त अनलाइनको समाचारअनुसार टेलिभिजन पत्रकारितामा विशेष दख्खल राख्ने अर्याललाई थर्ड पोल ग्रुपले सो ग्रुपद्वारा सञ्चालित न्युजपोलार डटकमको प्रधान सम्पादकमा नियुक्त गरेको हो ।
नेपाली पत्रकारितामा दुई दशक लामो अनुभव रहेका पत्रकार अर्यालले विसं २०५७ मा रेडियो सगरमाथाबाट पत्रकारिता शुरु गरेका थिए । उनीसँग च्यानल नेपाल, सगरमाथा टेलिभिजन, न्यूज २४ र हिमालय टेलिभिजनमा विभिन्न पद र जिम्मेवारीमा रही काम गरेको अनुभव छ ।
अब तपाईँको पालो । अनलाइन मिडियामा देखिएको आकर्षणको कारण के हुन सक्छ ? के धेरै मिडिया खुल्नु समाज र पाठकका लागि फाइदाजनक नै हो ? कि यसले समाजलाई खासै फाइदा गर्दैन ? तपाईँलाई केही लेखौँ जस्तो लागेको छ ? छ भने कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्नुस् वा हामीलाई mediakurakani@gmail.com मा लेख्नुस् ।
Tags Digital Journalism eKagaj NepalWatch
प्रेस सङ्ग्रहालय स्थापना गर्दै प्रेस काउन्सिल »